“Ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko” (Jo 2, 7b) - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Les enjeux internationaux des présidentielles il y a 2 jours
90 bénéficiaires de la formation sur la protection sociale il y a 3 jours
Fehin-kevitry ny fivoriana natao ny 21 – 24 Aogositra 2018 il y a 3 jours
La troisième journée était une journée d’affluence il y a 3 jours
Airtel Madagascar et HEDM signent une convention de partenariat il y a 5 jours
Voir Sadio Mané et se faire tuer il y a 7 jours
CAN 2019 : le Sénégal n’a pas retenu la leçon malgache il y a 10 jours
CNaPS forme 80 personnels de l’EEM il y a 10 jours
La lumière depuis 2014 fuit toujours il y a 13 jours
La Caisse assure une formation sur la protection sociale à Betongolo il y a 13 jours
Rabemanantsoa Jean Simon Jude il y a 2 mois
TAONA 2018 : JOBILY faha-145 taonan’ny “finoana Katolika”
faha-5 taona naha-Paroasy – Mb Cécile-TANGAINA.
“Ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko” (Jo 2, 17b). 145 taona amin’ity taona 2018 ity izao no nahatongavan’ny “finoana Katolika” tety amin’ny faritr’i Tangaina-Ampitatafika Atsimondrano, arovan’i Mb Cécile. Fari-piadididam-piangonana maro no efa nisy azy nandritra izany. Niaraka tamin’ny Fiangonana-Misionera nisy an’i Ambohijanaka sy Fenoarivo izy nandritra ny taona maro. Rehefa nahaleo tena Ambohijanaka dia mbola zana-piangonana niaraka tamin’i Fenoarivo hatrany izy, izany hoe ny Pretra tamin’ireo faritra ireo no nitantana azy… Taty aoriana, rehefa niha-nitombo ny kristianina dia natokana ho Paroasy izy, ary dia ny Pretra nitantana ny Paroasy Anosizato sy Ankazotoho no nitantana azy. Taorian’izay dia ny Pretra nitantana ny Paroasin’Ilanivato indray no nitantana azy. Niaina ny rafi-pintanana antsoina hoe “Vondrona an-drenivohitra” izy nandritra ireo vanim-potoana roa ireo ka Isotry no Renim-piangonana.
“Ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko” (Jo 2, 17b). Taty aoriana dia nankinin’ny Eveka mpitantana ny Diosezy tamin’ny Fikambanan’ireo Pretra Karma izy ka lasa zanam-piangonana tao amin’ny Distrika Misioneran’Itaosy indray nandritra ny 15 taona… Nitombo isa hatrany ny mponina tety an-toerana ary tsapan’ny Eveka fa miha-matotra ara-pinoana ny Kristianina ka hatramin’ny volana Oktobra 2013 dia nataony ho Paroasy mahaleo tena amin’izay i Tangaina ary hatramin’izay dia nisy Pretra mirahalahy avy hatrany, dia ny Curé sy ny Vikera notendrena hipetraka eny an-toerana. Ankehitriny dia efa misy Diacre sy Frère Régent ihany koa.
Mankalaza izany Jobily faha-145 taona nidiran’ny “finoana Katolika” sy ny faha-5 taona naha-Paroasy anay izany àry izahay amin’izao taona 2018 izao. Eo ny ezaka “Fampivoarana ny maha-Olona manontolo” iombonana amin’ny Diosezy, fa ankoatr’izany dia miezaka izahay hiaina manokana ny teny faneva hoe : “Ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko” (Jo 2, 17b). Efa aty an-toerana ihany koa ny “Logo” n any sary maneho izany ary efa nosaokafana tamin’ny fetim-piangonana ny 26 Novambra 2017 teo izany fankalazana izany.
“Ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko” (Jo 2, 17b). Ezaka ara-pinoana sy ny ara-panahy aloha no laharam-pahamehana ho trano mafiorina imasoan’ny mpitantana ny Fiangonana dia ny Pretra sy ireo Biraom-piangonana mbamin’ny Filankevitra miara-miasa aminy. Tanjona arak’izany ny hanaovana ezaka manokana mahakasika ny ara-pinoana : ny vavaka, ny sakramenta, matsom-panahy, fivahinianana Masina ho an’ny sokajina herivelona rehetra ato amin’ny Fiangonana… Raha bangoina dia ezaka lehibe mahakasika ilay “Fiangonana-Olona”. Mbola mitohy koa ankoatr’izany ny fitsidihana tokantrano ny kristianina katolika rehetra mamondrona ny Paroasy, ataon’ny Pretra.
Ankoatr’izany dia ny “foto-drafitr’asa” fanorenana “Trano Foibe” : salle d’Oeuvre, birao fiasana sy fandraisana olona ho an’ny Pretra, biraon’ny Filan-kevitra, ny Sekretera, efitra fivoriana na fiofanana, ary indrindra trano honenan’ny Pretra izay mbola tsisy hatramin’izay. Efa nanaovana ezaka maro sosona izany hatramin’ny taona 2016 no mankaty : hiragasy, déjeuner concert, Spectacle an-kalamanjana, rakitra isaky ny Zoma 1°, “Fitia tsy mba hetra”(Boky Volamena). Efa roa taona izao no nanombohan’ny asa ary efa madiva ho vita kanefa mbola goavana ny asa miandry, ankoatry ny fampitaovana tsy maintsy ilaina ao anatin’izany. ka hararaotina ny manentana ny kristianina tsivakivolo, indrindra ireo “Zanaka am-pielezana” ary ireo tsara sitra-po sy malala-tànana. Hisy koa ny ezaka fanatsarana ny trano Fiangonana sy ny tontolo manodidina ny faritry ny Fiangonana manontolo : tokontany, tamboho, zaridaina, trano fivoahana…
“Ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko” (Jo 2, 17b). Hatao ny Alahady faha-15 Jolay 2018, tontolo andro ny “ivon’ny fankalazana ny Jobily” ka hanaovana hetsika lehibe ara-pinoana ho an’ny tapany maraina ary hetsika ara-kolotsaina samihafa ny tolak’andro. Amin’ny fetim-piangonana ny 25 Novambra 2018 kosa ny fanakatonana izany fankalazana izany… Koa dia miombom-pifaliana ary miombom-pahasoavana, miara-misaotra an’Andriamanitra isika rehetra.
RABEMANANTSOA Jean Simon Jude, Curé
Election 2018 : Les enjeux internationaux des présidentielles - il y a 2 jours
CNaPS SASS à Mampikony : 90 bénéficiaires de la formation sur la protection sociale - il y a 3 jours
Prière : Journée mondiale pour la sauvegarde de la Création - il y a 19 jours
Lu sur La-croix.com : En Irlande, le Pape dans la tourmente des abus du clergé - il y a 19 jours